जाँदाजाँदै दुई मन्त्रीले गरे सरुवा
काठमाडौँ, ३ फागुन- बहिर्गमनको तयारीमा रहेको सरकारका दुई मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका महत्त्वपूर्ण पदमा सरुवा गरेका छन् । दुवै जनाले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सरुवा गरेका हुन् । सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमले उमेर हदले अनिवार्य अवकाश पाउन १८ दिनमात्र बाँकी रहेका सिँचाइ विभागका महानिर्देशक अशोक सिंहलाई जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा सरुवा गरेका छन् ।
सिंहले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी आगामी फागुन २० मा अवकाश पाउँदैछन् । गौतमले सहसचिव सरोज पण्डितलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् । गौतमले बबई सिँचाइ आयोजना प्रमुख रमेशबन्धु अर्याललाई समेत मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन् । उक्त आयोजनामा योञ्जन श्रेष्ठलाई लगिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले बुधबार नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरेका छन् । उनले १२ औं तहका डा. विनोदमान श्रेष्ठलाई विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरेका छन् । श्रेष्ठले आगामी चैतमा उमेर हदले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । यसअघि मन्त्री बोहराले नियमविपरीत बहाल रहेका निमित्त महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई हटाई ११ औं तहका डा. तारानाथ पौडेललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । पन्तले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले पन्तलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मन्त्री बोहराले भने सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै डा. श्रेष्ठलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका हुन् । अब डा. पन्त राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, ठिमी र डा. पौडेल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा फर्कने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।
म्यानपावर व्यवसाय आर्यघाटबाट फर्काउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीको गुहार
आफैंले पठाएको विज्ञप्ति बारे थाहा छैन डीएसपीलाई